नार्कोनन सफलताको भिडियो - जुलियस भी.
करिब १८ वर्षको उमेरमा मेरो जीवन मान्छेले सफल मान्नेखाले भर्खरको युवावस्थामै साँच्चै राम्रो जागिर, आफ्नै घर थियो।
जीवनको अर्को पाटोमा म अफिम मिसिएको लगुपदार्थ, मादकपदार्थ र Xanax कुलतमा फसिसकेको थिए।
कुलतको बानीले त्यस्तो बिन्दुमा पुगिसकेको थिए जहाँ ममा नियन्त्रण भन्ने चिजै थिएन। म कैयौं दिनसम्म घर आउँदैनथे, आमालाई म कहाँ छुँ भन्ने थाहा हुन्नथ्यो। उहाँ मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँ म जिउँदो छुँ कि छैन मात्र जान्न चाहनुहुन्थ्यो।
औषधीले मेरो जीवनका हरेक चिज छिनिरहेको थियो। ६ फुट अग्लो मेरो तौल ११२ पाउन्ड थियो।
म यति अस्वस्थ्य थिए कि उभिन मात्र सक्थे, रक्तचाप कम थियो र घरिघरि बेहोस हुन्थे।
डेटक्सका लागि तीनपटक अस्पताल गए। म पूरै समय नशामै हुन्थे। तीनैपटक अस्पताल छाडेको एक घन्टाभित्रै मैले लागुपदार्थ प्रयोग गर्न थाले। अनि मेरो आमाबुवा आउनुभयो। भाग्यले गर्दा म नार्कोनन आइपुगे।
एकपटक सौना कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि म चार–पाँच मिनेटभित्रै निदाउन थाले। दिमाग जताततै दौडन छाड्यो। खुट्टा र ढाडको दुखाइ हट्यो।
कार्यक्रम पूरा गरेपछि म ग्रेजुएसनको प्रमाणपत्रसहित त्यहाँबाट निस्किए। म धेरै खुशी थिए। आमाबुवाले मप्रति गर्व गर्न थाले। मलाईं सबै ठीक भएको जस्तो लाग्यो।
मेरो शरीरबाट सबै हानिकारक पदार्थ निकाल्न साढे दुई वर्ष लाग्यो।
त्यसपछि मैले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरिन।
© 2020 नार्कोनन नेपाल. सर्वाधिकार सुरक्षित। • अनलाईन गोपनीयता सूचना • प्रयोग सर्तहरू • गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना • अस्वीकृति: व्यक्तिगत परिणामहरूको कुनै गारन्टी गरिएको छैन र यो व्यक्ति अनुसार भिन्न हुन सक्छ।